जहाँ महिलाहरु सुत्केरी हुनेबित्तिकै होटलमा पठाइन्छ ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalजहाँ महिलाहरु सुत्केरी हुनेबित्तिकै होटलमा पठाइन्छ !
Home अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ महिलाहरु सुत्केरी हुनेबित्तिकै होटलमा पठाइन्छ !
जहाँ महिलाहरु सुत्केरी हुनेबित्तिकै होटलमा पठाइन्छ !
आमरुपमा जब महिला पहिलो चोटि आमा बन्छिन्, तब उनलाई राम्रो हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि उनलाई दुई तीनदिन त अस्पतालमै राखिन्छ पनि । तर दुनियामा एउटा यस्तो सहर पनि छ जहाँ पहिलो पटक आमा बन्दा महिलाहरुलाई होटलमा पठाइन्छ ।
डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा रहेको सो अनौठो होटेल बेबी होटेलको नामले चर्चित छ । दिन होस् वा रात त्यहाँ हरेक समयमा नवजात शिशु रोएको आवाज सुनिन्छ । त्यहाँ होटलका अन्य कर्मचारी मात्र होइन नर्स तथा डाक्टरहरु पनि यताउता गरिरहेका हुन्छन् । होटलको दृश्य देख्दा त्यो कुनै होटल नभै प्रसुति अस्पताल जस्तो लाग्दछ ।
उक्त बेबी होटलमा सुत्केरी महिलालाई दुई दिनसम्म राखिन्छ । यदि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या भएमा चाहीँ लामो समयसम्म अर्थात् सञ्चो नभएसम्म राख्न पाइन्छ । अझ मज्जाको कुरा त के भने यो होटलमा बस्दा सुत्केरी महिलाले कुनै शुल्क नै तिर्नु पर्दैन ।
त्यो सुत्केरी होटेल सरकारी कोषबाट चल्दछ । त्यहाँ सबै बच्चालाई उनीहरुको जिवनको पहिलो दिनमा बराबारीको अधिकार तथा समान हेरचाहको अवसर प्रदान गरिन्छ । बच्चाका आमाबुवा जुनसुकै सामाजिक वा आर्थिक अवस्थाका होउन्, गरीब वा धनी जे होउन् उनीहरुलाई बराबर अधिकार मिल्दछ । महिलाले पनि आफुले चाहेको कुरा मगाएर खान पाउँछन् । त्यहाँ पाइने मध्ये ६० देखि ९० प्रतिशत खानेकुरा अर्गानिक हुन्छन् ।
महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउनका लागि प्रोत्साहित गर्न यस्तो सुत्केरी होटलको अवधारणा ल्याइएको हो । त्यो होटलमा आउने आमा बुवालाई संयुक्त रुपमा ५२ हप्ताको छुट्टि अफर गरिन्छ । आमाचाहीँ लाई १८ हप्ताको विदाको तलबको ग्यारेन्टी गरिन्छ ।
प्रचण्डले दिए खुमलटारस्थित निवासमै बोलाएर राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बधाई तथा शुभकामना
१५ बर्षीया बालिका: जसले बुबा गुमाएको २१ दिनमै आमा गुमाइन्